Akụkọ - Gịnị na-akpọre (RA) ọla kọpa foil na otú o si eme?
Gịnị na-akpọrela (RA) ọla kọpa foil na otú o si eme?
Nyefee foil ọla kọpaA na-arụpụta ma na-emepụta ya site na usoro ntụgharị anụ ahụ, usoro mmepụta ya dị ka ndị a:
Inweta: A na-ebunye akụrụngwa n'ime ọkụ na-agbaze ka a tụba ya n'ime ingot yiri kọlụm square. Usoro a na-ekpebi ihe nke ngwaahịa ikpeazụ. N'ihe gbasara ngwaahịa ọla kọpa, ọla ndị ọzọ ma e wezụga ọla kọpa ga-ejikọta na usoro a.
Isi ike(ọkụ) Na-atụgharị: A na-ekpo ọkụ ingot ma tụgharịa n'ime ngwaahịa etiti agbakọtara.
Achịcha acid: A na-eji ihe ngwọta acid na-adịghị ike na-ehicha ngwaahịa dị n'etiti mgbe mkpụgharị ahụ gasịrị, iji wepụ oyi akwa oxide na adịghị ọcha n'elu ihe ahụ.
Nkenkenke(Oyi) Na-atụgharị: A na-atụgharịkwa ngwaahịa dị n'etiti warara a kpochara ruo mgbe a ga-atụgharị ya na ọkpụrụkpụ ikpeazụ achọrọ. Dị ka ihe ọla kọpa na-eme ka ọ bụrụ ihe na-akpụ akpụ, ihe siri ike nke ya ga-esi ike, ihe siri ike na-esiri ike ịkwagharị, ya mere, mgbe ihe ahụ ruru ụfọdụ ihe siri ike, ọ ga-abụ nkwụsị nke etiti iji belata ihe siri ike, iji mee ka ọ dị mfe ịkwagharị. . N'otu oge ahụ, iji zere mpịakọta na mpịakọta na-agbagharị n'elu ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị omimi nke ukwuu, a ga-etinye igwe igwe dị elu n'etiti ihe na mpịakọta na ihe nkiri mmanụ, nzube ya bụ ime. ikpeazụ ngwaahịa elu imecha elu.
Na-eweda ala: Nzọụkwụ a dị naanị na ngwaahịa ndị dị elu, ebumnuche bụ ihicha griiz igwe a na-ebute n'ime ihe n'oge usoro ntụgharị. N'ime usoro ihicha, a na-emekarị ọgwụgwọ nguzogide oxidation na ụlọ okpomọkụ (nke a na-akpọkwa ọgwụgwọ passivation), ya bụ, a na-etinye onye na-ahụ maka passivation na ngwọta nhicha iji belata oxidation na discoloration nke ọla kọpa na ụlọ okpomọkụ.
Na-akpachapụ anya: Ihe dị n'ime crystallization nke ihe ọla kọpa site na ikpo ọkụ na okpomọkụ dị elu, si otú a na-ebelata ike ya.
Na-eme ihe ike(Nhọrọ): A na-agbaji n'elu foil ọla kọpa (a na-efesa ntụ ntụ ọla kọpa ma ọ bụ ntụ ntụ cobalt-nickel n'elu foil ọla kọpa wee gwọọ ya) iji mee ka ọ dịkwuo njọ (iji mee ka ike bee ya sie ike). N'ime usoro a, a na-agwọkwa elu na-egbuke egbuke site na ọgwụgwọ oxidation dị elu (electroplated na oyi akwa nke metal) iji mee ka ihe ahụ nwee ike ịrụ ọrụ na okpomọkụ dị elu na-enweghị oxidation na discoloration.
Nkewa: A na-ekewa ihe mkpuchi ọla kọpa a na-atụgharị n'ime obosara achọrọ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.